Indlela yokusebenzisana nabathengisi be-Pushy eMexico
Iindwendwe ezininzi eziya eMexico ziyaxoliswa ngabantu abathengisayo abazama ukuzithengisa izinto abazifunayo-ngamanye amaxesha bayasuswa xa befuna ukuthenga oko kunikwa. Ingaba uhleli echwebeni okanye kwi-cafe yangaphandle, okanye uhamba nje esitrato, abathengisi baya kukuthetha, bathethe nawe kwaye banikele izinto okanye iinkonzo.
Xa ndihamba kuqala mna eMexico, ndaziva ndihlaselwa ngabantu bezama ukuzithengisa izinto, becela imali, bathethe nam ngezitrato.
Emva kokuhlala eMexico ngeenyanga ezimbalwa ndabuyela eCanada ukutyelela. Ukuhamba ngaphantsi kwesitrato, ndaqonda ukuba ndiziva ndingenabuhlobo kwaye ndabanda (kwaye andingathethi ngokushisa). ECanada ndikwazi ukuhamba ngeenxa zonke imini ngaphandle komntu ongathethiyo ongathethi kum. Ndandisetyenziselwa ukunikezelwa rhoqo ngabantu abasesitratweni, kwaye ndiyilahlekile.
Abathengisi yinyaniso yobomi eMexico. Kukho izizathu ezimbalwa ezihlukeneyo. Ubuthathaka luyingxenye ye-equation: abantu abaninzi kufuneka bahlakulele ukwenza ubomi, kwaye ukuma ngaphandle kwesihlwele ngokukwenza ukuba iminikelo yakho ifumaneke lula yindlela enye yokwenza oko. Kwakhona inxalenye yenkcubeko: kuyinto eqhelekileyo ukuba abantu bavakane ngesitalato baze bathethe nabo.
Amacandelo ekujongana nabathengisi
Kukho amaxesha abathengisi abacaphukisayo, kungakhathaliseki ukuba ujonga njani. Nazi izicwangciso ezimbalwa zokukunceda ukujamelana nokucaphukisa kwabantu ngokuzama ukuzithengisa izinto.
Ukuzihoxisa: Kukho amaxesha apho kufuneka ubenokukunyamekela ngokusemandleni akho, njengokuba ufika kwindawo entsha, uvakalelwa kunoma yimuphi uhlobo lomngcipheko, okanye usenokukrokrelwa ngesohlwayo. Kuloo matyala kufuneka uqale ugxila kwizinto ozenzayo kwaye apho kufuneka uhambe khona. Musa ukukhathazeka ngokuba nomsindo, vele ubabambe nje ngokusemandleni akho.
Yiba nesicwangciso xa usifikile kwindawo entsha: Xa ufika kwisikhululo se-moya okanye kwisikhululo sebhasi kwaye unabantu abaninzi befuna ingqwalasela yakho, unokukhubaza kwaye unesimo esichengeni. Hlela ukuthutha kwangaphambili, okanye khangela i- taxi egunyazisiweyo iteksi ukuthenga ithikithi yakho iteksi.
Gwema ukudibanisa kwamehlo: Ukuba unomdla, thintela ukudibana kwamehlo. Yithi "akukho i-gracias" ngaphandle kokukhangela umntu, kwaye ngokukhawuleza baya kufumana umyalezo baze bahambe. Naluphina intsebenziswano engaphezulu inokuthathwa njengophawu lomdla, kwaye kufuneka ikhutshwe ukuba ungathanda ukushiywa yodwa.
Khetha indawo yakho: Khetha iindawo apho kukho abathengisi abancinci. Iindawo zokutya zangaphandle kunye neefestile zijoliswe kwiithagethi zabathengisi. Ukuba ungathanda ukutya okanye ukusela ngaphandle kokuphazanyiswa, khetha indawo yokudlela yesibini kunye nebhokisi okanye uphahla lwephahla apho ungenakuncitshiswa khona ngabathengisi.
Gxuba incoko: Ngamanye amaxesha ngokuqala ingxoxo nomthengisi ungafunda ngabo kunye nobomi babo, kwaye ingaba nethuba lokuqonda imveli, nangona ungathengi nto. Abaninzi babo bachitha yonke imini yabo behamba bejikeleza ukunikela ngempahla yabo ebantwini kwaye bayonwabile ithuba lokuxoxa.
Ukuxabisa izinto ezintle: Ukutshintsha indlela yakho yokujonga abathengisi, uyaqonda ukuba akudingeki uhambe ukhangele yonke into ofuna ukuyithenga. Kwezinye iimeko, unokuhlala kwi-cafe yangaphandle kunye nabathengisi baya kuza kuwe - ngokwenene indlela elula kakhulu yokuthenga!
Musa ukuzisa i-Case of Hepatitis A Emva kwe-Your Mexican Caribbean Vacation
NgoJulayi 2016 Imikhosi kunye neMicimbi eMexico
5 kwiiRep Park eziphambili eMzantsi Mexico
NgoJuni 2017 iMibhiyozo kunye neMicimbi eMexico
Igadi zaseLuxembourg eParis: Isikhokelo esigqibeleleyo
Ukuhlola ii-Botanical Gardens zase-Alaska
I-SuperShuttle: I-Washington DC yeZithuthi zoThutho
Iingcebiso zokuPakisha izithuthi zendawo
I-Albuquerque Indawo yesine kaJulayi
ESan Diego e Spring
I-Double Barrel Saloon yaseLas Vegas
I-Photo Overview ye-Clark Botanic Garden
Uhambo lukaMtyholi eFrench Guiana - Igalari yezithombe
I-Quirky Kimono Museum yaseJapan
Izinto ezibalulekileyo ekufuneka zenziwe kwi-Hyderabad
ELos Angeles ngo-Apreli
Iimpawu eziphambili ze-TV ze-Digital eRaleigh / Durham / Chapel Hill
Iziganeko zeBelize kunye neMikhosi